John Connolly ›Blog an'i Juan Herranz
Boky John Connolly
Ra taloha, nataon'i John Connolly
Lohateny natao hyperbaton satria raha miteny hoe "ra taloha" amin'ny Espaniôla isika, dia resaka fahadiovana kokoa io zavatra io fa tsy amin'ny hevitra hafa rehetra. Ny fanontaniana dia ny antony hitadiavana fandikan-teny be pitsiny toy izany nefa ny boky voalohany dia nantsoina hoe "Bokin-taolana." Na izany na tsy izany, tapaka ny fanapahan-kevitry ny orinasa, amin'ity ...
Boky John Connolly 3 tsara indrindra
Ny fananana tombokavatanao manokana dia antoky ny fahombiazana amin'ny sehatry ny famoronana. Ny fitantaran'i John Connolly dia manolotra toetra miavaka izay mbola tsy fahita tamin'ny endrika noir. Ny sarin'ilay mpitsikilo azy Charlie Parker dia miaraka amin'ny fidirany amin'ity karazana polisy mainty ity izay nanaovany ilay subgenre. Marina fa ny mpanoratra hafa ...
The Woman of the Forest, nataon'i John Connolly
Rehefa misy mpanoratra tsy mety ritra toa an'i John Connolly niafara tamin'ny fanaovana protagonista toa an'i Charlie Parker stereotype tonga lafatra an'ny olombelona afaka mitahiry fihetsem-po mifanohitra, manohitra fihetseham-po sy eritreritra antagonista ao amin'ilay olona iray ihany, miaraka amin'ny verisimilitude marokoroko, ny lalan-drà mitantara dia mampiseho ny lalan-dra tsara indrindra ...
Dark Times, nataon'i John Connolly
John Connolly indray no manao azy. Manomboka amin'ny antsasaky ny tantara eo anelanelan'ny fampihorohoroana sy ny karazana mainty dia mahasarika ny mpamaky rehetra hatramin'ny famakiana ny havizanana. Tsy ho tonga maimaimpoana mihitsy ny fiatrehana ny ratsy. Ny maherifo rehetra dia tsy maintsy miatrika ny nemesis voajanahary, ilay mijoro ho toy ny hetsika fifandanjana ifotony mba ...
Mozika alina nataon'i John Connolly
Raha miainga amin'ny voalohany ka hatramin'ny tantara faharoa, dia toy ny hoe nahita ny tenanao talohan'ny volan'ny tantara misavoritaka ianao. Mandra-pahatonganao manomboka mamantatra an'io mozika alina io ... Karazana feon-kira ratsy izay manomboka amin'ny alalàn'ny feon-kira kely ary miafara amin'ny fihirana symphony orkesitra symphony ...